DateMyPet.com : Nezvedu
Another kufambidzana paIndaneti? Aihwa. Musangano nzvimbo dzinovaraidza vanhu? Ehe.
Pfungwa nokuti DateMyPet.com akatanga panguva vachifurwa imbwa yangu kwedu mupaki. Senguva dzose, vacharerwa kutaura nesu uye vataure sei akanaka ari. Kazhinji izvi kuchaita kuti kukurukura. Kukurukurirana ava vanosanganisira nyore causal hurukuro chokuita hwavo. Total vaeni uye tinenge uchikurukura seshamwari akare. Ndiko simba redu dzinovaraidza. Anopa nevakawanda kubatana, kunzwisisa ani tiri.
The vabereki Ini kusangana famba izvi siyana refu vachifara vakaroorana anosarudza. Kunyange upenyu hwavo zvakasiyana chaizvo, vose kugoverana rudo mhuka. Somurume muridzi chipfuwo kana 'vanoda-to-kuva'. Achitaura kuna anosarudza, zvinondibatsirei kushamiswa vangani yemichindwe avo uye ukama ndokuguma nokuti mumwe nomumwe akanga asina kunoenderana rudo rwavo nokuda dzavo dzinovavaraidza. Izvi siyana kubva 'iye akavenga drooling imbwa wangu’ kuti 'iye sema kuti katsi wangu’ uye klassiske 'anofunga Ndiri kupenga nekuti ini kuvabata sezvinoita vacheche'. Apo chisarudzo akauya kusarudza pakati shamwari kana mhuka – yaiva pasina brainer nokuda ruzhinji. The dzinovaraidza akahwina.
Saka pano tiri, “kana uchida kundirwarira, unofanira kufambidzana nomumwe dzinovaraidza wangu”. Ndiko ari nemotokari shure website iyi. Kana waiziva ruoko chokutanga kuti munhu chipfuwo anoda, izvozvo aizoita zvinhu nyore zvizhinji. Ndizvo link simba kunzi unogona yakavakwa pamusoro.
DateMyPet.com hachisi chimwe kufambidzana paIndaneti. Ndinoda kuti uve munharaunda nokuda mhuka dzinovaraidza. Kutsvaka rudo kana ushamwari. Saka edza uye anotiudza zvaunofunga.
Kana usiri chipfuwo muridzi, uri kutambirwa zvakare. Asi ingorangarirai, “…kufambidzana dzinovaraidza wangu”.
Members : Rutsigiro mibvunzo, ndapota login kuchikwama chenyu
Contributors: Kana uchida kupa nyaya tigutsikane yedu yepaIndaneti, tapota taura nesu munyori AT datemypet.com
Press zvokubvunza: Please pasi chako chikumbiro rokumanikidza AT datemypet.com
rakavakwa 2004, Date My Pet akava aitungamirira zvokufambidzana nzvimbo chete vanoda dzinovaraidza. Kuramba kukura ichi uye nani kushumira nhengo dzedu, mu 2014, Date My Pet partnered pamwe Venntro Inc (pose boka nevezvenhau) kuva chikamu kwavo munyika yose kufambidzana Network, richisvika mamiriyoni anosarudza kupota nyika.